Comrex's EarShot IFB nwere ike belata Mmepụta Mmepụta | NAB Show News | 2020 NAB Show Onye Mmekọ Media na Onye Mmepụta NAB Show LIVE. Akụkọ Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi
Home » Apụta » Comrex's EarShot IFB nwere ike belata Mmepụta Ego
Mmepụta ọ bụla ọkachamara na-agbasa ozi mgbasa ozi na-agba mbọ ịtọlite ​​ga-efu ha nnukwu oge ma ọ bụrụ na abịa maka okike a chọrọ iji hazie ma hazie ya. Mana ọnụ ahịa nke imepụta naanị ga-abụ ụdị ụlọ ọrụ chunk dị ka Kpọọ na-arụ ọrụ iji belata, na nke ha EarShot IFB bụ otu n’ime ọtụtụ ngwa ọrụ ha mepụtara iji nyere aka mee nke ahụ maka ọtụtụ okike na-aga n’ihu na ihe dị ugbu a.
Ebe ọ bụ na e guzobere ụlọ ọrụ ahụ azụ na 1961, Kpọọ ejeela ozi dika ihe nchebe nke teknuzu site na iji teknụzụ ọhụụ na ohuru ọhụụ maka redio na telivishọn tupu ha emee ya na isi. Kpọọ A na-echepụta ma na-ewulite akụrụngwa na-eji teknụzụ kachasị dị elu iji jikọọ ndị na-agbasa ozi na ndị na-ege ha ntị. Companylọ ọrụ ahụ na-arụ ọrụ iji wulite ngwaọrụ a pụrụ ịdabere na ya, nke ndị ọrụ injinia nwere ike ịtụkwasị obi ịrụ ọrụ, ọbụlagodi n'oge mgbasa ozi kachasị mgbagwoju anya.
Ihe karịrị afọ isii, Kpọọ arụpụtala akụrụngwa kacha mma kachasị mma nke ndị ọrụ redio na igwe onyonyo ji ọnụ ọgụgụ ụwa. Ọtụtụ n'ime Comrex's Ngwa ahịa gụnyere ụlọ ọrụ ha na-eduga na ụlọ ọrụ ACCESS na codex ọdịyo nke BRIC-Link. Ngwaọrụ ndị a na-enye ọtụtụ ngwa ị na-ebugharị ọdịyo, yana nke ahụ gụnyere egwuregwu-site na igwu egwu, ụda olu, njikọ Studio, na ihe ndị ọzọ.
Koodu vidiyo LiveShot IP bụ naanị ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ na-enye, ma ọ na-enye ndị ọrụ vidiyo ụzọ abụọ, yana IFB abụọ. Nke a na - eme ka ọ bụrụ usoro ngbasa ozi ntinye akụrụngwa zuru oke. Site na njikọta ọtụtụ ọwa data, na usoro nrụpụta ọrụ maka usoro ihe eji achọ ihe nke ọma, Comrex's codecs, tinyere CrossLock VPN Teknụzụ, na-enyere aka ịnye ọkwa ntụkwasị obi na-enweghị atụ maka mbufe ọdịyo na / ma ọ bụ vidiyo dị elu na ntanetị ọha. Companylọ ọrụ ahụ na-enyekwa azịza ajụjụ ndị ọbịa gụnyere ngwakọ ekwentị maka POTS na VoIP yana ọnụ ụzọ odiyo IP na-akpọ Opal maka ndị ọbịa ọkachamara.
The ACCESS na Njikọ BRIC Codec ọdịyo IP a na-eji teknụzụ mgbasa ozi dị elu iji hụ na mgbasa ozi a pụrụ ịdabere na ya karịa netwọ IP ndị na-ama aka. Site n'enyemaka ọtụtụ afọ na IP, Kpọọ nwee ike ịzụlite CrossLock ngwaọrụ ndị nwere ike ijikwa mkpa pụrụ iche nke ịgagharị vidiyo, na mmepe nke ha LiveShot Teknụzụ vidiyo IP. Mgbalị ndị a emechaziela teknụzụ ngwakọ ekwentị ha na ngwaahịa dịka VH2, ma ọhụrụ, enwere ike ịme ala karịa iji ngwaahịa dịka EarShot IFB, nke a na-emefu ego mmefu ego maka nrụpụta ọrụ mgbasa ozi belata obere.
Comrex's EarShot IFB bụ sistemụ ngwaike nke na-enye ndị na-akpọ oku ụda olu na-ebi ndụ. Na EarShot IFB na-enye ndi n’ere mgbasa ozi ihe mmemme televishọn ndụ televishọn na IFB n’ozi mgbasa ozi dị na mpaghara dị ka TV ENG. Ihe dị ka ndị na-akpọ oku iri atọ nwere ike ịkpọ oku ma gee ntị na ntanetị, nke na-eme ka o kwe omume iji otu igbe dị mfe dochie edo edo POTS 30.
Ebe ọ bụ na ọtụtụ ụlọ ọrụ ka na-eji ahịrị POTS (Plain Old Telefon System) ịnye nri IFB ha, mkpa nke ndị mgbasa ozi televishọn belata ọnụ ahịa ma nọrọ n’ime atụmatụ ahụ na-adịwanye mkpa, ọkachasị mgbe iji akara POTS na-ebute naanị ọkụ ọkụ karịa ya. na-eme. Kpọọ wuru nke EarShot IFB iweta ike nke VoIP (Voice-over-IP) na teknụzụ IFB.
Ọtụtụ atụmatụ nke EarShot IFB -agụnye:
Ntinye ederede ọdịyo anọ (nke enwere ike ịhazi abụọ maka IFB)
Nwere ike ijikwa ndị na-akpọ oku 30
Nhọrọ faili egwu ga-ahọrọ
Na-azoputa teknụzụ VoIP
Na-eji G.711, enwere ike ịhazi ya maka ọdịyo dị elu
Maka ozi ọzọ banyere EarShot IFB, gaa na www.comrex.com / ngwaahịa / ntị ntị-ifb /.
Gịnị mere Kpọọ Ọ dị mma Maka ụlọ ọrụ Mgbasa Ozi
A bịa na ụlọ ọrụ mgbasa ozi, na okike ya na-anya ya, onweghị ihe ị ga-ekwu nke na-egosighi etu o siri rụọ ọrụ ya nke ọma na ndị ọkachamara nwere ọfụma na ọtụtụ ụdị aha pụrụ iche. Companylọ ọrụ dịka Kpọọ nke na-ewepụta akụrụngwa mgbasa ozi kachasị mma, yana mgbakwunye nke mgbakwunye ọnụ ahịa ndị na-agbanwe agbanwe, ndị na-agbasa ozi nwere naanị ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ na mmepụta ha na obere nsogbu mmefu ego na-egbochi ike ha na-enyere ọdịnaya ha na ụdị ọ na-akwado.
Maka ozi ọzọ na Kpọọ, nleta, www.comrex.na .com /.
Access Codex ọdịyo nke BRIC-njikọ IP Onye na-ahụ maka mgbasa ozi Igwe ahia mgbasa ozi ụlọ ọrụ mgbasa ozi mgbasa ozi mgbasa ozi CES2017 Cobalt Encoder Kpọọ dijitalụ gburugburu EarShot IFB Graham Chapman Prmoted toEditor Litra Koodu vidiyo LiveShot IP Matthews POTS Ụgha & Akụrụ Igwe TV Ultra HD Forum Ngosi Injinia 2020-05-11
Previous: Xilica na-ebido 'Genius' Global Training Program
Osote: Mmepụta nke Focal Point na-eji ATEM Obere ka ọ bụrụ ajụjụ ọnụ nke Live Streaming maka GBMC HealthCare System